Tetik'asa Lion Tattoos ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy - tetikasam-borona
Tetik'asa Lion Tattoos ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Jolay 6, 2016
Rehefa manana tato-tiana liona ianao, dia maneho fomba fijery mpitarika ianao. Matahotra sy miteny mafy ianao. Fantatsika fa fantatra amin'ny herim-pony, ny heriny ary ny heriny ny liona. Ny sarimihetsika dia naseho mazava tamin'ity tatoazy ity. Ny liona dia azo atao tsiambaratelo, mijery ny tena marina, tony ary manahy mihitsy aza. Miankina amin'izay tadiavinao sy ny fomba anehoan'ny mpanakanto azy ny fahaiza-manaony eo amin'ny hoditrao.
Ny dikan'ny Lion Tattoo
Ny tatoahy #lion dia manjavona foana amin'ny fijery azy ary miresaka momba ny avonavona, ny herimpo, ny fanoherana ary ny tanjaka. Misy dikany isan-karazany arakaraka ny kolontsaina. Ny liona ihany koa dia midika hoe Purity, Power, Power, Herim-po, Finoana, Adidy, Fiarovana, Fahamarinana, Heranjaka, Fahamendrehana ary Fahefana. Ny dikan'ny lôtô-liona dia tena manan-danja tokoa, izany no antony mahatonga ny olona maro maniry hahafantatra ny dikan'ny zavatra nosoratany. Mahafinaritra ny zavakanto ary afaka manarona ny zavak'ilay vatana na dia ny ampahany bitika indrindra toy ny rantsantanana aza.
Ny fomba fijerin'ny liona momba ny lohahevitra dia ny mahatonga azy ireo ho iray amin'ireo #tatao tsara indrindra. Liona anankiroa izay naseho an-tsehatra indray no milaza amintsika ny momba ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehany ary na ny Atsinanana aza tonga hihaona amin'ny Tandrefana. Ny liona dia afaka miresaka momba ny fitarihana ary azo jerena any amin'ny toerana masina na hajaina manerana izao tontolo izao.
Ny loko ahatongavan'ny tatoazy dia mamaritra zavatra maro ihany koa. Azonao atao ny manapa-kevitra ny loko sy ny endriky ny tatoazy. Tena manan-danja ny fanamafisana ny antony ahitantsika ny endriky ny liona isan-karazany ao amin'ny vatana. Ny famoronana ny tatoazy dia mahatalanjona fotsiny.
1. Cool hasehonao liona tato ho an'ny vehivavy
2. Liona mahafatifaty tapa-doko fandravahana hevitra ho an'ny vehivavy
Tsy toy ny tatoazy elefanta izay tsy malaza akory, ny tati-baventy liona dia noforonina amina hodin-tsavily maro be. loharanon-tsary
3. Liona tato ho an'ny tato ho an'ny zazavavy any an-damosina
Afaka misafidy ny ho mpilalao mahay ianao rehefa mifidy ny tato-tetezanao. Aza manahy ny habeny. loharanon-tsary
4. Liona mahafinaritra Tattoo fanoratana hevitra ho an'ny lehilahy eny an-tsambo
Azonao atao ny manapa-kevitra hoe hatraiza no tadiavinao ny liona eo amin'ny hodinao. Noho ny fanampian'ny mpanakanto mahay dia azonao antoka fa hahazo izany tatoazy mahafinaritra eo amin'ny hodinao izany. loharanon-tsary
5. Liona naratra tànan'ny tatoazy amin'ny hafatra; aza matahotra
Ny olona sasany dia tiany kokoa raha ny lohan'ny liona no misolo azy fa ny hafa kosa te hanana ny ampahany rehetra. loharanon-tsary
6. Hery manontolo raozy ary liona tato ho an'ny vehivavy
Tsy misy karazana lôtika misy liona nofidinao izay tsy dia mampihetsi-po. Afaka mampiasa loko hafa amin'ny liona ianao mba hahatonga anao ho samy hafa amin'ny zavatra ampiasain'ny hafa. loharanon-tsary
7. Amazing Tetik'asa tato ho an'ny tetik'ady ho an'ny zazavavy
Hilaza aminao izahay fa ny loko sy ny endrika nofinidinao dia izay hanavaka anao amin'ny hafa. Afaka milalao eny amin'ny loko, ny vava, ny maso ary ny sisa koa ianao. loharanon-tsary
8. Kely saina ny tetezana an-tànana tete-tànana ho an'ny lehilahy
Zavatra manan-danja lehibe iray azonao atao ny manapa-kevitra rehefa hiditra ny fonenana voajanahary izay ahafahan'ny liona mifintina. Rehefa manana loko marevaka ianao dia hahazo tato-liona iray izay tsy dia fahita firy loatra. loharanon-tsary
9. Liona manan-tato (tetiarana) noforonina ho an'ny lehilahy
Tokony hilaza aminareo izahay fa ny sandan'ny tatoazy dia samy hafa. Ny lehibe kokoa ny habeny, ny lafo kokoa azy io. loharanon-tsary
10. Voninkazo mamy sy liona Tato-tato ho an'ny ankizivavy amin'ny antsasa-tapisaka
Ankehitriny, satria vonona ny hanana tato ho an'ny liona ianao, fotoana tokony hisafidianana ny ampahany amin'ny vatanao izay tianao. Tsy izay ihany, tsy tokony haka mpanakanto fotsiny ianao mba hanao ny sarinao ho anao. Ny fanaovana sary diso dia mety hahatonga anao ho kivy kokoa noho ny fahafinaretana ara-pananahana. loharanon-tsary
11. Liona mierona tatoazy tanana hevitra ho an'ny lehilahy
Ireo tranonkala ahafahan'ny mpanakanto sasany maneho ny asany amin'ny tatoazy dia mety ho toerana iray hanombohana ny hikaroka ny mpanakanto raha tsy manana ianao. loharanon-tsary
12. Ny akanjo mivoy liona tato ho an'ny vehivavy
Rehefa mahazo mpanakanto ianao, dia tsy maintsy miaraka amin'ny antsipiriany amin'izay tianao hatao amin'ny faran'ny andro. Ny safidy dia anao avokoa. loharanon-tsary
13. Liona mierona Loko tato ho an'ny lehilahy eo amin'ny tratra
Tsindrio eto raha hamoronana Lion Tattoos bebe kokoa
tattoos sleevemehndi designcompass tattooelefanta tatoazyTattoo Feathertattoo cherry blossomfitiavana tatoazydiamondra tattootatoazy fokorip tattoosAnkle TattoosHeart Tattoosmoon tattoostattoostratra tatoazylion tattoostattoos armtattoostatoazy ho an'ny zazavavytattoo octopusmasoandro tatoazytattoos crosscat tattoostatoazy loloeagle tattoosraozy tatoazytattoos ho an'ny lehilahytattoo eyetattoos mpivadytattoo infinityloto voninkazohenna tattootattoos rahavavyTatoazy ara-jeometrikatattoos foottato ho an'ny vatofantsikatanana tatoazytattoos backtattoos mahafatifatyanjely tattoostattoos voronaNy zodiaka dia mampiseho tatoazykoi fish tattoonamana tattoos tsara indrindratattoo ideastattoo watercolortatoazy voninkazoscorpion tattoomozika tatoazyarrow tattoo